Ny tantaranay - OneOdio
Ny mozika dia ampahany iray lehibe amin'ny zavatra niainan'ny olombelona. Mino ny herin'ny feo izahay. Afaka manova tanteraka ny fomba hitantsika fotoana fohy, sarimihetsika, fampisehoana na hira tiana tiana izany. Misedra ny feo am-peo miaraka amin'ny hamafin'ny fihetsiketsehana Ary mino ihany koa izahay fa mpanonon-doha avo lenta dia manamafy ny traikefa mahafinaritra sy mampihetsi-po amin'ny fihainoana mozika.
Ny feo aloha ho avy.
Amin'ny tsena izay ananan'ny marika loham-pianakaviana manana kalitao avo lenta, fa mandritra izany fotoana izany amin'ny vidiny lafo, izay manasarotra ny ankamaroan'ny tanora DJ, tia ny mozika. Manomboka ary mifarana amin'ny mpanjifa ny zava-drehetra. Tamin'izay no nahavoa antsika ny hevitra tsotra nefa matanjaka. Tsy azontsika atao ny mamely ny fifandanjana tonga lafatra amin'ny famokarana headphone avo lenta amin'ny vidiny mora?
Avy eo i OneOdio dia lasa nandry.
Vao manomboka ny feo. Mpanamboatra manana traikefa vokarin'ny famokarana audio 10 taona mahery izahay. Amin'ny alàlan'ny famoronana fonon-tànana tsara kokoa dia afaka manompo ny mpanjifantsika tsara kokoa isika ary manentana ny fitiavantsika fatratra ny vokatra. Ny tena zava-dehibe indrindra dia mizara zavatra iray isika: ny herin'ny mozika. Io firehetam-po io no mandrafitra ny kolontsainay ary mamaritra ny vidiny mora. Ny feonay DJ kalitao dia nahazoana malalaka tamin'ny vahoaka. Ny sofinay amin'ny sofina be loatra, natao ho an'ny fivoriana fihainoana efa ela. Izahay dia namboly mafy ny sainan'i OneOdio ao amin'ny orinasa DJ ， Monitor, HIFI. Ankoatr'izay, mamorona traikefa tsy manam-paharoa miavaka amin'ny indostrian'ny ANC mihoatra ny firenena 30 any Eoropa, Amerika Avaratra, Azia, sns sns isika, dia misy fiantraikany marika sy laza malaza eran'izao tontolo izao.